တိုက်​ပွဲ​ခေါ်သံ2(Original Story by @thatkozaw) — Steemit
တိုက်​ပွဲ​ခေါ်သံ2(Original Story by @thatkozaw)
thatkozaw (58)in #partiko •3years ago (edited)
Drugwar Player ​တွေအ​နေနဲ့ ထပ်​သိထားရမယ့်​အချက်​က​တော့
မိမိ စခန်း တိုက်​ခံရလို့ ရှုံးနိမ့်​သွားပီဆိုတာနဲ့ 12နာရီတိတိ Shield ပွင့်​ပီး ထိုအချိန်​အတွင်း မည်​သူမှတိုက်​လို့မရ​​အောင်​ အကာအကွယ်​ဖြစ်​​နေပါလိမ့်​မယ်​။
အကယ်​၍ သင်​ကသာ 12 နာရီ
ထို shield ပျက်​ပြယ်​သွားပါလိမ့်​မယ်​။
တဖက်​ကပြန်​ကြည့်​​တော့လည်း တစ်​ချို့ အ​ကောင့်​အပိုရှိတဲ့သူ​တွေက ကိုယ့်​အ​ကောင့်​ကို ကိုယ်​ပြန်​တိုက်​ပီး Sheild ဖြစ်​​အောင်​လုပ်​ကာ Resources စုကြပါတယ်​။
(လက်​ရှိ​တော့ shield ကို 1 hour သာလျှင်​​ပေး​တော့တာ​တွေ့ပါတယ်​
တကယ်​ဆို တစ်​​ကောင့်​နဲ့တစ်​​ကောင့်​ steem ပို့လို့ရ​ပေမယ့်​ D W A ပို့လို့မရ​တော့ ဒီနည်းနဲ့ အ​ကောင့်​တစ်​ခုထဲမှာ သွားစုလို့ရတဲ့သ​ဘောပါပဲ။
Sheild ဖြစ်​သွား​တော့ ထပ်​လာတိုက်​လို့မရ​တာ​ကော တစ်​ချက်​ခုတ်​နှစ်​ချက်​ပြတ်​​ပေါ့။
အ​ကောင့်​များများနဲ့ အချိန်​ကိုက်​ စုနိုင်​ရင်​ပို​ကောင်းတာ​ပေါ့။
​နောက်​တချက်​က ကျ​နော့မှာအ​ကောင့်​အပိုတစ်​ခုရှိတယ်​ Find Targets က ကိုယ်​နဲ့ Drugs ထွက်​နှုန်း တန်းတူတာ​လေး​တွေပဲပြ​တော့ နိမ့်​တဲ့အ​ကောင့်​ Find Targets ထဲက​နေရှာ နာမည်​မှတ်​ထားပီး မြင့်​တဲ့အ​ကောင့်​နဲ့တိုက်​တယ်​။ ဒါမျိုးလုပ်​ဖို့က browsers နှစ်​ခုသုံးတာပို​ကောင်းတယ်​ဗျ။
​နောက်​တစ်​ခုအ​နေနဲ့က ယခင်​ post မှာ ကျ​နော်​​ရေးထားတာ Fight မှာ မတိုက်​ခင်​ အင်​အားဘယ်​​လောက်​ရှိလဲ ဝင်ကြည့်​လို့မရဘူး​ရေးထားခဲ့တယ်​။ ဟုတ်​ပါတယ်​ Fight မှာဝင်​ကြည့်​လို့​တော့မရပါဘူး သို့​သော်​ Fight မှာ မိမိတိုက်​မယ့်​လူကိုမတိုက်​ခင်​ ကျ​နော်​တို့ ယခင်​က steemitအ​ကောင့်​ ဝင်​ကြည့်​သလို
drugwars.io/@ ခံပီး နာမည်​ရိုက်​ထည့်​ကာ profile ကို ဝင်​ကြည့်​စစ်​နိုင်​ပါတယ်​။
​နောက်​တခုက Shield ဖြစ်​​နေတဲ့အ​ကောင့်​​တွေ မှတ်​သားထားတာပို​ကောင်းတယ်​။ လက်​ကျန်​ Hour ကိုမှတ်​ထားပီး alarm ​ပေးထားပီး ပွင့်​တာနဲ့ဝင်​တိုက်​ရင်​ ပိုရနိုင်​​ခြေရှိတယ်​။ သူ့အ​နေနဲ့လည်း Shield ရှိ​နေတယ်​ဆိုပီး အမှုမဲ့အမှတ်​မဲ့ထား​တော့ Unit သိပ်​မထုတ်​မိသလို Resources ​တွေလည်း 12 နာရီစာမဟုတ်​​တောင်​အ​တော်​ကျန်​တတ်​တယ်​။ မ​နေ့က LeaderBoard ထဲက 1-500 အ​ကောင့်​​တွေ​တော်​​တော်​များများဟာ No Army နဲ့ Shield ဖြစ်​​နေတာ​တွေ့ရတယ်​။
သို့​သော်​ ထွက်​နှုန်းများသူ​တွေမို့ resources ​တော့ အ​တော်​ကျန်​​နေတာ​တွေ့ရတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ Shield အပွင့်​​စောင့်​တိုက်​နိုင်​ရင်​ ​ကောင်းနိုင်​တယ်​လို့မြင်​မိတာပါ။
ဂိုဏ်းကြီး​တွေ လက်​​ရေစမ်းကြ​လေ​လေ​မောင်​တို့ ကြိုက်​ကြ​လေ​လေ​ပေါ့​နော့။
​အောက်​က ဇယားက Unit တစ်​ခုချင်းစီရဲ့ ကုန်​ကျစာရိတ်​နဲ့ သူ့သက်​ဆိုင်​ရာ တိုက်​ခိုက်​မှု ခုခံမှု အမြန်​နှုန်းနဲ့ အမျိုးအစားကို ​တွက်​ရလွယ်​​အောင်​ ​ဖော်​ပြထားပါတယ်​။ SS ရိုက်​ယူရ​အောင်​မို့ပါ။
Rowdy W60022 12 Melee
Bouncer W 1.4k, A 1.3k610 11 Melee
Knifer W 3k, A 800 12510 Melee
Gunman W 3.6k, A 3.2k 25 129Range
Sniper W 3k, A 5.6k 40 8 14 Range
Hitman W 10k 30 15 8 Range
Ninja W 7k, A 7k 50 205Melee
BigMaMa W 9k, A 12k 12 110 20 Melee
Bazooka W 15k, A 13k 145 25 17 Range
Mercenary W 19k, A 14k 120 75 15 Range
Class မှာ အ​ဝေးပစ်​နဲ့ အနီးကပ်​တိုက်​နှစ်​မျိုးပါပါတယ်​။ အ​ဝေးပစ်​​ class ​တွေက​တော့ Range ​တွေဖြစ်​ပါတယ်​။
အနီးကပ်​တိုက်​​တွေက​တော့ ​Melee လို့​ရေးထားတဲ့
အနီးကပ်​အမာခံ Unit နဲ့ အ​ဝေးပစ်​ တိုက်​ခိုက်​မှုများတဲ့ Unit တို့တွဲသုံးတာ ပိုအဆင်​​ပြေမယ်​ထင်​ပါတယ်​။
ကျ​နော့တန်​တယ်​ထင်​ရတာ​ပြောမယ်​ဆိုရင်​ Meleeမှာဆို bouncer, BigMaMa, နဲ့ R​ange မှာဆို Mercenary တို့တွဲတာပိုကြိုက်​ပါတယ်​။
Unit ​တွေမှာ အများအားဖြင့်​ W က ပို​ပေးရတာများပီး A ပို​ပေးရတာဆိုလို့ Sniper နဲ့ Big MaMa တို့ပဲရှိပါတယ်​။
Building upgrade တင်​တာကျ​တော့ ကျန်​တာတူပီး Drug Building ​တွေမှာ A က​ပေးရတာပိုများပါတယ်​။
​နောက်​ရက်​မှသာလျှင်​ Unit အ​ကြောင်း ထပ်​​ရေးပါ​တော့မည်​။
​ယခု post သည်​ ကျ​နော့်​အထင်​နှင့်​ ယူဆချက်​သက်​သက်​ဖြင့်​​သာ​ရေးသား​ထား​သော​ကြောင့်​ မှား​ကောင်းမှားနိုင်​ပါတယ်​။ ဆင်​ခြင်​၍သာဆုံးဖြတ်​ပါ။
@timcliff ​​ရေးထားခဲ့သလို ​ပြောရရင်​ဖြင့်​
Most importantly - remember it is justagame. Don't take it too seriously, and have fun
ဒါက သူ့ရဲ့ Drugwar Beginner Guide post ပါ
#myanmar #drugwar #game #guide
3 years ago in #partiko by thatkozaw (58)
Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have receiveda21.07% upvote from us for your 2550 Partiko Points! Together, let's change the world!
တိုက်ကြည့်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမိပါရဲ့ အဝိုင်းကတလည်လည် 😁😁
တိုက်ပွဲခေါ်သံတွေ ဘာတွေနဲ့ဆိုတော့ Drug က အရှိန်မြင့်နေကြပြီးပေါ့
Mobile legend ကို မပြတ်နိုင်သေးလို့မဆော့ဖြစ်သေးပါဘူးဗျာ
ဟုတ်တယ်ဗျ စိတ်ညစ်စရာတွေ ခဏလောက် မေ့သွားတယ်
မတူဘူးဗျ ဒီက စစ်​တပ်​ထုတ်​ပီး ပို့ရတာပဲ
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဥူးသက် မကျွှမ်းသေးတော့ သိပ်မတိုက်ဖြစ်
Fight မှာ username ရိုက်ပြီး တန်းတိုက်လို့ရလား
Drugwars.io/@usernameနဲ့ profile ထဲဝင်​ပြီး attack name နိပ်​တိုက်